::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather नेपालका युवा सुहाउँदो काम कफी व्यवसाय हो:: Rojgar Manch ::
नेपालका युवा सुहाउँदो काम कफी व्यवसाय हो
दीप थापा, कफी व्यवसायी
विहिवार, २०७५ बैशाख ०५ गते ००:५२
दीप थापासँग धेरै खालका अनुभव छन् । समाजसेवा, साहित्य, व्यवसाय आदि उहाँका परिचय पनि हुन् । २०४३ सालमा काठमाडौं महाराजगञ्जमा जन्मिनु हुने थापा हिजोआज कफी व्यवसायमा समर्पित हुनुहुन्छ । कृष्णबहादुर थापा र श्याम कुमारी थापाका सुपुत्र दीपसँग कफीका अनेक अनुभवहरु छन् । उहाँसँग गरिएको छोटो वार्ता :
तपाईको शैक्षिक योग्यता कति हो ?
मैले १२ कक्षा पास गरेँ नवोदित कलेजबाट ।
पढ्दा पढ्दै कसरी आकर्षित हुनु भयो व्यवसायतिर ?
मेरो सुरुदेखि नै व्यवसाय गर्ने लक्ष्य थियो । साथीहरु र दाइहरुको सल्लाहले म कफीतिर आकर्षित भएको हुँ ।
१० वर्ष जति भयो यो व्यवसायतिर लागेको । अब त जीवनभरी यही पेशामा रहन्छु ।
यो पेशामा स्वतन्त्रता छ । सेवा गर्न पाइन्छ । यो पेशाले मलाई आत्मबल पनि बढाएको छ ।
कसरी आकर्षित हुनु भयो त ?
व्यापारकै क्रममा दाइहरु राजकुमार श्रेष्ठ, लेखराज भट्टराईसँग सम्पर्क भयो । त्यसपछि उहाँहरुले दिएको सल्लाह अनुसार मैले व्यवसाय गर्दै गएँ । त्यस्तै मेरा दाइ विष्णु थापाको सुझावले पनि मलाई व्यवसाय गर्ने आँट थप्यो । त्यसपछि म निरन्तर रुपमा कफी व्यवसायमा लागेँ । आज मेरो लगन र दाइहरुको सहयोगले यो उन्नतिसम्म आइपुगेको छु ।
कहाँ–कहाँ छ तपाईको व्यवसाय ?
ठमेल, सानेपामा मुख्य रुपमा छ । त्यसपछि बौद्ध, चावहिल र पाटनमा पनि यो व्यवसाय छ ।
नेपालमा कफीतिर कत्तिको आकर्षित छन् ?
नेपालीहरु कफीतिर बिस्तारै आकर्षित हुँदै छन् । कफीको स्वाद, लाभ, आनन्द र यसको फाइदातर्फ आकर्षित छन् । औषत रुपमा सबै उमेरकाहरु यतातिर आकर्षित छन् ।
तपाई कफीका मेशिनहरु पनि बिक्री वितरण गर्नु हुन्छ ?
हजुर गर्दछौं । रोयल ब्राण्डको मेशिन सप्लाई गर्छु । यसमा आरु दाइहरुको सहयोग पनि छ । हामी आधिकारिक बिक्रेता हौँ– रोयल ब्राण्डको ।
कस्तो छ रोयल ब्राण्डको मेशिनको बजार ?
निकै राम्रो छ । अरुभन्दा बढ्ता क्वालिटी छ । मेशिनको क्यापासिटी बढी छ । गुणस्तर राम्रो भएकोले हरेक महिनामा राम्रोसँग माग भइरहेको छ यो मेशिनको । हामी इटालीबाट मगाइरहेका छौं । यसको डिलर क्षेत्रपाटीमा छ ।
तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छु । यो पेशा मन परेको छ । कफीसँग सम्बन्धित पेशामा रमाउन पाउँदा आनन्दित छु ।
तपाई त लेखन, समाज सेवामा पनि हुनुहुन्छ । कसरी भ्याइरहनु भएको छ ?
म साहित्य पनि लेख्छु । युथ फर ह्युमन राइट्समा पनि आबद्ध छु । साहित्यमा युवराज नयाँघरे र समाज सेवामा मेरा आदरणीय दाइ गुणराज प्याकुरेलको आत्मीयतासँग जोडिएर काम गरिरहेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जस्ता साहित्यिक संस्थामा पनि जोडिएर काम गर्न पाउँदा खुशी छु । समय मिलाएर काम गर्दा सबैतिर भ्याइन्छ ।
तपाईलाई यी कामका घर परिवारको सहयोग कस्तो छ नि ?
अत्यन्तै राम्रो सहयोग छ । खासगरी मेरी पत्नी मनिताले विदेशमा भन्दा स्वदेशमै बसेर काम गरौं भन्ने उनको सुझावलाई म सधैँ मनन गर्छु । उनी अनेक सुझाव र सल्लाह दिइरहन्छिन् । मनिताको प्रोत्साहनले मलाई नयाँ–नयाँ काम गर्नमा उत्साह थपिएको छ ।
भविष्यको लक्ष्य के छ नि ?
मैले गरेको यो पेशा अझ बलियो बनाउने सोचाइ छ । अझै माथि पु¥याउने सपना देखेको छु । अहिले यस्तै ३५–३० जना नेपाली युवाले रोजगारी पाएका छन् । आउँदा दिनमा धेरैलाई रोजगारी दिन सकुँ– यो लक्ष्य लिएर म कफी व्यवसायमा समर्पित छु ।
नेपालमा कफी व्यवसायको सम्भावना कस्तो छ ?
निकै राम्रो छ । नेपालका युवाहरुले कफी उत्पादन, भण्डारण, बजार व्यवस्थापनमा सफलता हासिल गर्न सक्छन् । यो नेपाली व्यवसायका लागि नेपालमा हावापानी निकै सुहाउँदो पनि छ । युवाहरुले यो व्यवसायमा हात हाल्ने हो भने विदेश नै गइरहनु पर्दैन ।